BSOD ပြဿနာ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » BSOD ပြဿနာ [Problem]
1 BSOD ပြဿနာ [Problem] on 28th December 2009, 3:33 pm
ဒီလိုဗျ။ ကျွန်တော့်စက်က Movie(mp4, 3gp, avi, vob)ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် BSOD ပေါ်လာတယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ System Restore လုပ်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်။ အဲ....နောက် ၄-၅ရက်လောက်ကျ ပြန်ဖြစ်လာပြန်ရော။
ဒီတစ်ခါ ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူး window ပြန်တင်လိုက်တယ်။
ဟော... အခု ဖြစ်ပြန်လာပြန်ပီ။ ဂယ်ပဲ.... စိတ်လေတယ်။
ဒီပြဿနာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲမသိဘူး။ ၀ိုင်းစဉ်းစားပေးကြပါအုံး။
Stop : 0x0000000A (0x00000016, 0x0000001c, 0x00000000, 0x805022c2)
2 Re: BSOD ပြဿနာ [Problem] on 31st December 2009, 9:19 am
အကိုပြောတဲ့အတိုင်းစမ်းကြည့်လိုက်ပါ့မယ်။ CPU Temp: ကတော့ normal ပဲဗျ။ နောက်ပြီး Ram test ကို ဘာနဲ့စမ်းရမလဲမသိဘူး။
ကျွန်တော်မသင်္ကာဆုံးကလဲ Ram ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပီး ဖုန်တွေရှိနေတာကတော့ သေချာတယ်။
အဆင်ပြေသွားသည်ဖြစ်စေ၊ မပြေသည်ဖြစ်စေ ပြန်အကြောင်းပြန်ပေးပါ့မယ်။
ကိုကျော်မင်းရဲ့ အကြံပြုချက်ကိုလဲ စောင့်မျှော်နေမှာနော်... [You must be registered and logged in to see this image.]
အဲလိုတော့မနေစိမ့်လိုက်ပါနဲ့ [You must be registered and logged in to see this image.]
အားလုံး Happy New Year ပါ.....
3 Re: BSOD ပြဿနာ [Problem] on 1st January 2010, 1:42 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-12-24
ကို moeyake ခင်ဗျာ.......အကို ့window ကဘာလည်းမသိဘူးခင်ဗျာ့.......ကျွန်တော်က window XP တော့လုပ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ့.......ကျွန်တော်လည်းအစကတော်တော်လေးပျားတုပ်ဖူးပါတယ်........ဒါ
ပေမယ့် window XP မှာက လုပ်ရတာတော်တော်လေးလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ့......သူက RAM ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်သလို.......Processor ကြောင့်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်........ကျွန်တော်သိတဲ့ Blue screen of death ဖြေရှင်းတဲ့နည်းကတော့........ကျွန်တော့်အခုပြောမှာက window XP မှာဖြစ်ပါတယ်........သူကလွယ်ပါတယ်ခင်ဗျာ........အောက်လိုသွားလိုက်ပါ.......
Start==>Run==>msconfig ကိုသွားလိုက်ပါ.......System Configuration Utility box တတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်........အဲဒီကျရင် BOON.INI tab ကိုသွားလိုက်ပါ.......ပြီးရင်အဲဒီမှာ.....Boot Options ထဲက /SOS ရှေ ့မှာ check လေးပေးပြီးတော့.....Apply ပြီးရင် Ok ပေးလိုက်ရင် Restart တောင်းပါလိမ့်မယ်.......အဲဒါဆိုရင်နောက်ကို blue screen of death ကိုတတ်ချင်လို ့တောင်မတတ်တော့ပါဘူး.........အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ......
4 Re: BSOD ပြဿနာ [Problem]